एक छिन हासौंन - ४
कामरेडको बन्दुके कंम्पन !
अब पार्लरका कुरा त भए तीन बर्ष अगाडिका। अहिले जहा हाम्रो रेस्टुराँको पल्लो पट्टी नेल्स छ, जहाँ नङ राम्रो पारीन्छ। त्यहा पनि त्यस्तै छ ५० कटेका, व्हील चियरमा राखेर ल्याइएकाहरु नै नङको मर्मत गर्न आउँछन। सफाइ गर्नु भनेको त जरुरी को कुरा नै हो। उसो त देशको ब्यव्स्था राम्रो भएर पनि यो सब हुन गएको हुनु पर्छ। हाम्रो देशमा पो त सबै कुराको सहुलियत् छैन। एक छाक खान लाउन त धौ-धौ पर्छ। आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने त प्राय:मा सामर्थ्य छैन कहाँबाट त्यस्तो बिलासिताको कुराहरु उपभोग गर्ने ? बुढेसकालमा पाउने भत्ता लिन जानलाई त कत्ती माइल हिंडेर जानु पर्छ, त्यो पनि सजिलो सँग पाउन गार्हो छ। त्यसैले भोगाइ र बचाइमा फरक पर्नु स्वभ्वाविक पनि हो। यस्मा हाँस उठ्नु भन्दा पनि खिन्नता बोध हुनुनै जरुरी छ। तर हाँस पनि उठ्नु स्वभ्वाविक छ।
तर ---दुइ देश को ब्यवस्था र बुढा, बुढिको कर्त्ब्य अधिकारमा फरक देख्दा भने ब्यङ्यात्मक हाँसो उठ्नु स्वभाविक नै लाग्नु पर्ने हो। मेरो ठोकुवा चाँही हैन है ! यी कुराहरु पनि मेरा अनुभवभित्र परेकोले यहाँ पोख्न लालायित बने भुलभएमा माफि चाहन्छु। तर देशको कानुन नियम र सहुलियत भएमा सबैमा यस्तै चाहना नहोला भन्न पनि सकिन्न। जब मान्छे सुन्य हुन्छ। उस्को केही आधार हुँदैन। आफुलाई असुरक्षित महसुश गर्छ, कसैबाट आश्वासन, प्रेरणा पाउदैन भने चाहे ऊ जवान नै किन नहोस् ? उस्मा जत्तिनै शाहस, हिम्मत, आँट, जागर भएपनी उस्लाई असक्षम र बृद्ध भएको महसुश हुन्छ।
यस्को आशय यही हुन जान्छ कि मान्छेमा चुस्ती, फुर्ती हुनुमा पनि सबैकुराले साथ दिएको हुनु पर्छ, अर्थात आर्थिक स्थिती पनि सबल हुनु पर्छ। टेन्सन हुनु हुँदैन अनी मात्र आफुलाई सबल ठान्न सकिन्छ कि ? मन नै खराब छ, कही कतै केहीको आशा छैन, भरोशा छैन भने कहाबाट जागर जोश हुन्छ ? यस्को अर्थ यो होइन कि उनिहरुलाई रत्तिभर पनि दु:ख, पीर छैन भन्ने। मान्छे को त्यस्तो छ जस्लाई पीर चिन्ता छैन तर मानसिक चिन्ता भएपनी ब्यवस्था सबल छ। अहिले देशमा के होला ? भरै के होला ? भन्ने चिन्ता छैन भने त त्यसै पनि मान्छे आत्मानिर्भर र सुखी त भै हाल्छ नि। यदी हाम्रो देश मा पनि त्यस्तै भै दिएको भए शायद ! त्यसैले त उहिलेका बुढा बुढीहरु अहिलेका भन्दा कत्ती बलिया र फुर्ती थिए रे ? किन भने त्यतिबेला अहिलेको जस्तो डर, त्रास, भय थिएन। व्यवस्था सबल नभए पनि कसैमा स्वार्थ पनि त थिएन। खान प्राकृतिक र शुद्ध थियो। तर ---यस्ता बिलासिता भने त थिएन है ? खाली यत्तिमात्र फरक हो अहिलेका हामी र उहिलेकाहरुमा हिम्मत, बल जागर चाँही थिए होलान। अँ त यो पनि जीवन भोगाइको एक्पाटो नै हो। मैले देखे र जानेका अनुभुतिहरु मध्ये । आदर्णीय पाठक बृन्द!, म जे जत्ती पनि लेख्दैछु यो अचानक सर्सर्ती मनमा लागेका कुराहरु सिधै टाइप गर्दैछु। किनकि, अमेरिकाको बसाइ छ समय त हाम्रालागी अदृश्य मालिक बनेको छ। उस्ले भर्सक हामीलाई चट्पटाउन नै दिदैन, ता पनि लेखनक्षेत्रको मोहले तानेर मात्र यत्ती गर्ने पनि समय सुटुक्क चोर्दैछु । भावनालाई गुमसाउन नसकेर। यो मेरो ब्यक्तिगत अनुभिती पनि हो तपाईंहरुलाई आफ्नो परिस्थिती पोखेँ क्षमा याचना सहित्।
पहिला बिध्वंसकारी हुदैं आतंककारी सम्मको बिल्ला पाएका, अनि पछि भने क्रान्तिकारीको धार समाएर गणतन्त्रकारी हुँदै सरकारी भएका हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आजकल चिन्ता छ रे ।
क्रान्तिकारी सोचको प्रभावकारी परिचालन गरेर नेपाललाई चमत्कारी बिकास गर्छु भन्दै हिडंने मान्छे आजकल नेपालको राजनेताहरुले सधैं बोल्दै आएका र आफ्नो नालायकीपन लुकाउन सबैले प्रयोग गर्ने पुरानो वाक्यांस प्रयोग गर्देछन " … के गर्ने ? काम गर्न त खोजेको हो नि! विदेशी षडयन्त्रकारीले गर्नै दिंदैनन। "
कुनैबेला 'अब हामि आयौं, दश बर्षमा नेपालले युगान्तकारी लक्ष हासिल गर्छ' भन्दै हिंडने मान्छेको यो लाचारी र र बिलम्बकारी बचन सुनेर जनता पनि अकमक्क परेका छन।
त्यसो त, बेला-कुबेला बर्बराउने र कहिले आफ्नै त कहिले अमेरीकी कुटनीतीज्ञको हत्याको योजना बनेको जस्ता हल्ला फैलाएर एकचोटी त 'त्रिशुल बाबा-२' को उपनाम समेत पाएका हुन उनले। अनी उनका केहि धूँवादार वक्तव्यलाई ठट्टा सम्झेर हाँस्ने बानि पनि परिसकेको छ नेपाली जनताहरुलाई । तर हालै केहि समय यता भने केहि दिनको अन्तरालमै फरक फरक वक्तव्य दिएर उनी जनता हँसाउने हैन तर्साउने काममा लागेका छन।
उनको वक्तव्य सुनेर हाल देशमा दुईथरी सनसनी फैलिएको छ । एकथरी मानिसहरु उनको यो वक्तव्यलाई पुरानै ठट्टाका नया 'कडी' सम्झेर बस्दैछन भने केहि भने हतप्रद: भएका छन। कारण, उनको नया वक्तव्य पहिलेको भन्दा पनि अझै भारि-भरकम छ। अझ सिधै भन्ने हो भने उनको यसपालाको वक्तव्य, वक्तव्य कम, धम्की बढि छ। त्यो पनि हतियार उठाउने धम्की।
सरकारमा आफैं छन र फेरि आफैं हतियार उठाउने धम्की पनि दिदैंछन हाम्रा जननेता, गज्जव छ! यो हतियार कस्को बिरोधमा उठाउन लागेको हो सामान्य सोचको मान्छेले बुझ्न कठिन छ ।
केहि महिनाको सरकारी कुर्सीको आरोहण पछि नै कामरेडहरुको चमत्कारी गफका घैंटो फुटि सकेको प्रष्ट भएको छ र उनका हालैका दिग्भ्रमित वक्तव्यहरु केलाएर हेरेमा गनतन्त्रका पूजारीहरु गणतन्त्र हाँक्न नसक्ने प्रष्ट भैसकेको छ ।
अबका दिनमा पनि ‘विदेशीले काम गर्न दिएनन’, ‘सहयात्रीले सहयोग गरेनन्’ भन्ने सढे-गलेका बासी वक्तव्य दिएर आफनो नालायकिपन छुपाउने प्रयास नगर्दानै कामरडहरुको हित हुने देखीन्छ । त्यस्तै कुरालाई छुट दिने हो भने ज्ञानेन्द्रले पनि एकताका "विदेशी पैसाको बाढी" आएको कुरा बताएका थिए र उनलाईनै बाढि पैह्रो रोकीएपछि फेरी देश चलाउन दिए वा ‘बाँध’ बाँधेर काम चलाउन दिएको भए नि हुन्थ्यो नि! , अझ अगाडी जाने हो भने पन्चेहरुले पनि मुखले त देश बनाउँछौं भनेकै थिए क्यार ! उनिहरुले पनि विभीन्न कारणबस बनाउन पाएनन् होला। उनिहरुलाई नै निरन्तरता दिएको भए पनि हुन्थ्यो नी।
समष्टिमा जनतालाई अब 'परिणाम' चाहिएको छ, कसैको गन्थन वा हुत्तिहारापन लुकाउने शब्दजालको वक्तव्य हैन। हजारौं जिवनको वलिदान र बर्षौं को प्रतिक्षा पछि देशमा गणतन्त्र आएको छ । अब फेरि पनि कसैले जनतालाई शब्दजालले भुलाउँला, आफ्नो अकर्मण्यतालाई विभिन्न आन्तरीक वा वाह्य समस्याको पुरानो पर्दा लटकाएर लुकाउँला भनेर नसोच्दैमा राम्रो होला ।
सत्तामा बस्ने रहर मात्रै छ तर देश चलाउने हुत्ती छैन भने योग्यलाई सत्ता छाड्न प्रजातन्त्रमा कहिल्यै छेकवार छैन । हैन, फेरी पनि छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने युक्तिको लागी कामरेडद्वारा यो हतियार उठाउने धम्की दिएको हो भने यसले उनिहरुको खोक्रो आदर्श, कार्यकुशलता, क्षमता र योग्यतालाई झनै नङ्याउने निश्चित छ ।
नेपालमा अझै पनि ब्रोड ब्याण्ड भनेको सपना हो। अहिले छन ब्रोड ब्याण्ड तर नाम मात्रका। राम्रो कुरो यो हो कि डायल अप मा ट्या !..ऽ.. ट्या!..ऽ.. गर्दै लाइन कुर्नु पर्ने स्थीती कमै छ। एक दिन यसो नेपाली बेबसाइटको के हाल चाल रहेछ भनेर नेपाली वेब पेजको र्‍यान्किंग हेरेको थिए। नेपाल या नेपालीलाइ भनेर बनेका साइट पनि टप एक लाखमा पर्ने साइट प्रश्स्तै रहेछन। तिनलाइ टप १० मा राखेर कुन कतै चर्चित भनेर राख्दैछु। सबभन्दा बढि चर्चितको १०० किलो तौल राखेको छु। जती हल्का भयो उती कम हेरीने साइट हुन। ल हेर्नुहोस कुन साइट कती झड्कीला छन।
1) www.nepalnews.com - 100
2) www.kantipuronline.com - 83.50
3) www.cybersansar.com - 71.5
4) www.ntc.net.np - 50.34
5) www.mysansar.com - 40.30
6) www.nepaljapan.com - 27.60
7) www.mazzako.com - 21.56
8) www.sajha.com - 20.30
9) www.newsofnepal.com - 19.47
10) www.dcnepal.com - 18.75
दौंतरी (www:dautari.org/)त नेपाल न्युजसंग दाज्दा ३४ ग्राम पो हुने रहेछ।
दौंतरीका केही पुराना अंक यसरी हेर्नसक्नुहुनेछ।